समाचार – Action Media
६ असार, वीरगञ्ज । बाराको सिमरास्थित जगदम्बा स्टिल उद्योगमा फर्निस आयल राखेको ट्याङकी पड्किएर आगलागी हुँदा दुई जना मजदुरको मृत्यु भएको छ । अन्य तीन जना घाइते छन् । मृतक दुवै भारतीय नागरिक हुन् । भारतको बिहार घर भएका ४० वर्षीय प्रदीप गोढ र ४५ वर्षीय रामनाथ महतोको मृत्यु भएको हो । शनिबार राति करिब ८ बजेको समयमा भएको दुर्घटनामा उद्योगमै कार्यरत राजकुमार बिक, इन्द्रप्रसाद अधिकारी र नवराज चौलागाई घाइते छन् । घाइतेको तराई सिमरा अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरुको अवस्था समान्य रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराका प्रमुख, प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिए । ट्याङ्की पड्किएपछि उद्योगमा आगलागी पनि भएको थियो । जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका र नेपाल आयल निगमको दमकलको सहयोगमा आगलागी नियन्त्रणमा लिइएको थियो । समयमै आगलागी नियन्त्रणमा लिएको छेउमै रहेक
६ असार, काठमाडौं । पोल्याण्डका क्यास्पर कोलोस्की युरोकप फुटबल खेल्ने सबैभन्दा कान्छा खेलाडी बनेका छन् । युरोकपको ११ देशमा आयोजना भइरहेको १६औं संस्करण अन्तर्गत शनिबार राति भएको स्पेन विरुद्धको खेल खेल्दै उनले कीर्तिमान बनाएका हुन् । ५५औं मिनेटमा माथेउज क्लिजको स्थानमा वैकल्पिक खेलाडीको रुपमा मैदान प्रवेश गर्दा उनको उमेर १७ वर्ष २४६ दिन थियो । क साता अघि मात्रै इंग्ल्याण्डका जुड बेलिङहमले युरोकप खल्ने कान्छा खेलाडीको कीर्तिमान बनाएका थिए । तर एक सातामै क्यास्पर त्यो कीर्तिमनन तोडे । क्यास्पर यस युरोकपको सबैभन्दा कान्छा खेलाडीसमेत हुन् । बेलिङहमल १७ वर्ष ३४९ दिन हुँदा क्रोएसियाविरुद्ध वैकल्पिक खेलाडीको रुपमा खेल्दै त्यो कीर्तिमान बनाएका थिए । उनले नेदरल्याड्सका जेट्रो विलेम्सको कीर्तिमान तोडेका थिए ।
कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहरमा धेरै बालबालिकाहरु संक्रमित बनिरहेका छन् । पहिलो लहर भन्दा दोस्रो लहर बालबालिकाका लागि संक्रामक देखिएको अवस्थामा अर्को नयाँ लहर आएमा बालबालिकाहरुका लागि निकै खतरनाक हुने विज्ञहरुले बताइरहेका छन् । विद्यालयहरु बन्द भएको अवस्थामा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट, बालबालिकाको स्वास्थ्य तथा मानसिक अवस्थाका विषयमा अभिभावकहरुमा चिन्ता थपिइरहेको छ । महामारीको समयमा अभिभावकहरुले के गर्ने ? के नगर्ने ? अभिभावकहरु संक्रमित भएको अवस्थामा बालबालिकाको हेरचाह कसरी गर्ने ? अनि बालबालिकाहरु नै संक्रमित भएमा के गर्ने ? डाक्टर शेफाली गुलाटीले इण्डियन एक्सप्रेसमा यस्तै जिज्ञासाहरुको जवाफ दिएकी छन् । कोभिड १९ को तेस्रो लहरको चर्चा सुनिएको छ र सो लहरबाट बालबालिकाहरु सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको भनिएको छ । के त्यो त्रास साँचो हो ? कोरोना भाइरस महामारीको तेस्रो लहरले बढ
६ असार, धनगढी । महाकाली नदीमा आएको बाढीले कञ्चनपुरमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको मोटेरेवल पुलको बाँध बगाएको छ । भीमदत्त नगरपालिका-१२ ओदालीस्थित महाकाली नदीमा निर्माण भइरहेको पक्की पुलको करीब ९० मिटर अस्थायी बाँध शनिबार राति आएको बाढीले बगाएको प्रहरीले जनाएको छ । ६ असार, धनगढी । महाकाली नदीमा आएको बाढीले कञ्चनपुरमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको मोटेरेवल पुलको बाँध बगाएको छ । भीमदत्त नगरपालिका-१२ ओदालीस्थित महाकाली नदीमा निर्माण भइरहेको पक्की पुलको करीब ९० मिटर अस्थायी बाँध शनिबार राति आएको बाढीले बगाएको प्रहरीले जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक अमरबहादुर थापाले शुक्रबारदेखि नै ड्याम काटिरहेको नदीले राति बहाव बढेपछि ९० मिटर क्षेत्रको बाँध बगाएको जानकारी दिए । तटीय क्षेत्रन जिकै पर्ने दोधारा चाँदनी नगरपालिका-१० को कुतियाकबर, शान्ति
६ असार, काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पूर्व सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री तप्तबहादुर विष्टको निधन भएको छ । उनको शनिबार राति ललितपुरस्थित मेडिसिटी अस्पतालमा उपचारका क्रममै निधन भएको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले जानकारी दिए । बिष्टको भेन्टिलेटरमा उपचार भैरहेको थियो । कोरोना पुष्टि भएपछि बिष्टको गत जेठ १६ गतेदेखि कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा उपचार हुँदै आएको थियो । तर स्वास्थ्यमा सुधार नआएपछि उनलाई थप उपचारका लागि जेठ २६ गते हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याइएको थियो । नेपाली काँग्रेस सुर्खेतका पूर्व सभापतिसमेत रहेका बिष्ट तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा राज्यमन्त्री बनेका हुन्। तप्तबहादुर बिष्ट राज्यमन्त्री
५ असार, धनगढी । सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा लगातार भइरहेको वर्षाका कारण महाकाली नदीमा पानीको सतह बढ्न थालेको छ । महाकाली नदीको शारदा ब्यारेजमा शुक्रबार राति एक लाख क्युसेकको हारहारीमा रहेको पानीको सतह बढिरहेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षिक (डीएसपी) अमरबहादुर थापाले पहाडी जिल्लामा भइरहेको वर्षाका कारण महाकालीमा पानीको सतह बढ्दै गइरहेको बताए । उनले शुक्रबार राति एक लाख क्युसेक मापन गरेको पानीको सहत बढेर अहिले एक लाख ७५ हजार क्युसेक पुगेको बताए । ‘शुक्रबार राति एक लाख मापन गरिएको पानीको सतह बिहान ८ बजेतिर एक लाख ६५ हजार क्युसके थियो,’ थापाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘दिउँसो मापन गर्दा बढेर एक लाख ७५ हजार क्युसेक पुगेकाले सतह बढ्दै गएको देखिन्छ ।’ नदीमा पानीको सतह वृद्धि हुँदै गएपछि निर्माणाधीन महाकाली पुलमा लगाइएको माटोको ड्याम पनि काट्न थालेको छ भने
नेपाल आइपुगे फुटबल टिमका प्रशिक्षक अलमुताइरी
असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय फुटबल टिमका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरी नेपाल आइपुगेका छन् । विश्वकप र एसियन कप छनोट अन्तर्गत दाेस्राे चरणका खेलहरु सकिएपछि कुवेतमै रहेका अलमुताइरी शनिबार बिहान काठमाडौं आइपुगेका हुन् । अलमुताइरिलाई अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का कार्यसमिति सदस्यहरु मधुसुदन उपाध्याय र रुपेश अधिकारीले त्रिभुवन विमानस्थलमा स्वागत गरेका थिए । छनोटको खेलहरु सकिएपछि नेपाली टिम भने गत आइतबार नै स्वदेश फर्किसकेकाे छ । कुवेती प्रशिक्षक अलमुताइरीले प्रशिक्षण सम्हालेपछि नेपालले विश्वकप छनोटकाे बाँकी ३ खेल खेल्याे । जसमा नेपालले चाइनिज ताइपेइलाई २-० ले पराजित गर्दा जोर्डन र अष्ट्रेलियासँग समान ३-० ले पराजित भएकाे थियाे । त्यसअघि इराकसँग मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलमा नेपाल ६-२ ले पराजित भएकाे थियाे । अलमुताइरी प्रशिक्षक बनेपछि यसपटक नेपालकाे खेल्ने शैली र खेलाडीकाे मानसिकतामा
५ असार, काठमाडौं । युरोकप २०२० मा समूह एफ ग्रुप अफ डेथको रुपमा छ । जहाँ तीन पूर्व च्याम्पियन छन् । त्यसैले यो समूहको हरेक खेल उत्तिकै प्रतिक्षित र महत्वपूर्ण बनेको छ । त्यही समूह डी अन्तर्गत आज पोर्चुगल र जर्मनीबीच खेल हुँदैछ । खेल जर्मनीको घरेलु मैदान म्युनिखमा नेपाली समय अनुसार राति ९:४५ बजे सुरु हुनेछ । साविक विजेता पोर्चुगलले पहिलो खेलमा हंगेरीलाई ३–० गोलले पराजित गरेको थियो भने जर्मनी फ्रान्ससँग १–० ले पराजित भएको थियो । हंगेरीसँगको खेलमा ८४ मिनेटसम्म गोल गर्न नसकेको पोर्चुगलले त्यसपछि ३ गोल गर्दा क्रिस्टियानो रोनाल्डोले दुई गोल गरे । जर्मनी भने आफैंले गरेको गोलमा पराजित बनेको थियो । जर्मनीविरुद्ध जित हात पारे पोर्चुगल नकआउट चरणमा पुग्नेछ । तर जर्मनीलाई भने प्रतियोगितामा अघि बढ्न जितको आवश्यकता छ । स्पेनसँग सर्वाधिक ३ पटकको युरो विजेता जर्मनी पोर्चुगलसँग पराजित भएमा लगातार दो
५ असार, काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टा थप २ हजार ४०१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । यस्तै थप ३४ जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । गत २४ घण्टामा ३ हजार ६६० जना कोरोना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।
‘प्लाइङ सिख’ मिल्का सिंहको निधन
५ असार, काठमाडौं । फ्लाइङ सिखको उपनामबाट परिचित मिल्खा सिंहको ९१ वर्षको उमेरमा शुक्रबार राति निधन भएको छ । गत महिना उनलाई कोभिड-१९ संक्रमण भएको थियो । यही साता कोभिडकै कारण उनको श्रीमतीको पनि निधन भएको थियो । सिंहका छोरा जिभ मिल्खा सिंहले ‘बुबा अब रहनुभएन’ भनेर इन्डियन एक्सप्रेससँग भनेका छन् । सन् १९५८ को कमनवेल्थ गेम्स च्याम्पियन मिल्खाले सन् १९६० को रोम ओलम्पिकमा सहभागिता जनएका थिए । मे २० मा कोरोना संक्रमण भएपछि उनलाई मोहनीमा एक निजी हस्पिटलमा मे २४ मा भर्ना गरिएको थियो । एक सातापछि डिस्चार्ज भएका उनलाई अक्सिजन लेभलम घटेपछि जुन ३ मा नेहरु हस्पिटलमा भर्ना गरिएको थियो । उनको पछिल्लो कोभिड रिपोर्ट नेगटिभ आएको थियो । मिल्खाका ३ छोरी र १ छोरा छन् । मिल्खाले एसियन गेम्समा ४ स्वर्ण पदक जितेका छन् । उनले १९५८ मा २०० र ४०० मिटर तथा १९६२ मा ४०० र ४ गुणा ४०० मिटर रिलेमा स्वर